DEG-DEG: Real Madrid, Man City Iyo Chelsea Oo Jimcaha Laga Saarayo Tartanka Champions League Ee Semi-finalka Ay Taagan Yihiin - Laacib
HomeWararka Champions LeagueDEG-DEG: Real Madrid, Man City Iyo Chelsea Oo Jimcaha Laga Saarayo Tartanka Champions League Ee Semi-finalka Ay Taagan Yihiin
April 19, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Kooxaha Real Madrid, Chelsea iyo Manchester City ayaa laga caydhin doonaa tartanka Champions League ee ay semi-finalka taagan yihiin, sida uu sheegay masuul sare oo ka tirsan xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA.
Saddexdan kooxood ayaa qayb ka ah naadiyada samaystay tartanka muranka badan dhaliyey ee European Super League, kaas oo ay xidhiidhada kubadda cagta ee kala duwan ku sheegeen mid aan sinaba loo aqbali karin, iyadoo UEFA iyo FIFA ku hanjabeen in ciyaartoyda kooxahan laga joojin doono in ay dalalkooda u ciyaaraan Koobka Adduunka iyo UERO.
Jesper Møller oo ka tirsan masuuliyiinta sar-sare ee xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa hadda shaaciyey in ay miiska ay saaran tahay oo go’aan laga gaadhayo kooxaha saddexda ah ee Real Madrid, Chelsea iyo Manchester City, suurtogalna ay tahay in laga saaro tartanka Champions League ee semi-finalka ay joogaan.
Jesper Møller oo sidoo kale ah guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta waddanka Denmark, ayaa yidhi: “Real Madrid, Manchester City iyo Chelsea, waa laga saarayaa tartanka, waxaanan rajaynayaa in Jimcaha ay arrintaasi dhici doonto.”
Masuulkan ayaa waxa kale oo uu ka hadlay sida uu ku dhamaan karo tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan oo ay UEFA go’aan ka gaadhi doonto, iyadoo wararka hordhaca ahna ay sheegayaan in PSG la guddoonsiin doono koobka iyadoo aan ciyaarin.
“Marka iyaga laga saaro tartanka, waynu arki doonaa sida uu ku dhamaado Champions League.” ayuu Jesper Møller ku sii raaciyey hadalkiisa.
Dhinaca kale, Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta UEFA ee Aleksander Ceferin ayaa shaaciyey in xubnaha Guddida Fulinta UEFA ay Jimcaha iskugu imanayaan shir aan caadi ahayn.
Jesper Møller oo kasii hadlayay waxa la filayo in ay kasoo baxaan kulanka Jimcaha ayaa yidhi: “Waxa Jimcaha dhacaya shir aan caadi ahayn oo ay xubnaha guddida fulintu yeelanayaan. Waxa aan filayaa in 12ka kooxood laga saari doono tartamada Yurub.”
Waxan idin weydiiyey mantay soo ma dhihin malaga saarayo waay sii wadanayan hadana jimcaha laga saaraa maxa waye marka hore iska hubiya intiina warbixinta ku degdegin wana mahadsantihiin